Orogoay dia iray amin'ireo firenena mangina indrindra maneran-tany. Misy ny taham-piterahana ambany indrindra, izay mahatonga ny firenena halaim-panahy ho an'ny mpizaha tany. Saingy ny antony lehibe ahafahana mitsidika an'i Orogoay dia karazana fanatanjahan-tena marobe. Eto amin'ity firenena ity dia misy zavatra mahaliana maro izay hisarika ny sain'ny mpizahatany traikefa sy tsy manana traikefa.
Inona no tokony ho jerena ao an-drenivohitra?
Mba hahatongavana any Orogoay dia aza manontany izay mahaliana hahitana eto, tsara kokoa ny manatsara ny làlana. Ny fitsangatsanganana ity firenena mahatalanjona ity dia mila manomboka amin'ny renivohitra Montevideo . Ity dia tanàn-dehibe manintona, izay misy trano fananganana kolontsaina mifangaro amin'ny trano maoderina. Ny antsasaky ny mponina dia monina ao an-tanàna. Ny ankamaroan'izy ireo dia mpifindra monina na taranaky ny mpiady voalohany.
Nitsidika ny renivohitr'i Orogoay ianao, tsy maintsy mijery tsara ny atidohany manaraka:
Ny morontsirak'i Oseana Atlantika, antsoina hoe "Riviera Uruguay";
National Museum Museum;
ny zaridaina botany ;
Esteves Palace ;
Museum of Carnival .
Ny ankamaroan'ny olona malaza any Uruguay
Ireo tranonkala ara-javakanto, ara-kolotsaina ary ara-boajanahariny etsy ambony dia manana toerana manan-danja eo an-tanàna Saingy misy toerana eto amin'ity firenena ity izay fantany manerana an'izao tontolo izao. Ho an'ireo toerana mahaliana ao Orogoay, saripika misy azy ireo eto ambany dia azonao jerena:
Ny Katedraly ao Montevideo. Tany am-piandohana tao amin'ny tranon'ity basilika ity dia nisy fiangonana Katolika kely. Ny fanorenana ny tempoly mihitsy aza dia nanomboka tamin'ny Novambra 1790. Hatramin'ny fiandohan'ny taonjato XX, ny Katedraly no tranobe avo indrindra tao Montevideo ary noheverina ho ivontoerana tsy ofisialy. Ao amin'ny tranon 'ny tempoly no misy ny vatoharan' ny arsevitry ny renivohitra ary ireo olo-malaza Orogoaiana. Hatramin'ny 1975, ny basilika dia iray amin'ireo tsangambato nasionalista nasionalin'ny Orogoay.
Nosy Lobos. Iray ihany koa ny atidohan'i Orogoay, izay efa ela no ivon-toeran-tsarimihetsika lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Ny nosy dia misy kilometatra vitsivitsy avy any amin'ny morontsiraka atsimo ary mahaliana satria misy liona maherin'ny 200 000 eto. Ilay nosy dia mivadika ara-bakiteny amin'ireo biby mampihomehy sy mahaliana. Ny sasany amin'izy ireo dia mirotsaka ao anaty rano, ny sasany kosa milentika eo amin'ny vatolampy. Fandrarana ny fisamborana ho an'ny liona, ary mahafinaritra ny mitandrina ny faritaniny.
Casapuableau's house. Ny fahitan'i Orogoay, izay tsy ahafahanao miala sasatra ara-kolontsaina fotsiny, fa koa mandany am-piadanana ny alina, dia ny trano Casapuiblo. Ity trano mahaliana ity dia hita ao Punta del Este . Izy io dia natsangan'ny Carlos Vilaro mpizaha tany, izay nanandrana nampiray ny trano fanorenana trano tokana amin'ny rafitrano italiana, afrikana ary kreôla. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nitombo ny trano ary nanjary trano fandraisam-bahiny.
Museum of Fine Arts antsoina hoe Juan Blanes. Tao amin'ny trano lehibe Palladio, natsangana avy amin'ny fitaovana trano lafo vidy ary voaravaka amin'ny marika Carrara, sarivongana sy ravin-tsavoka. Ny tranobe dia azo antsoina hoe sangan'asa ara-javakanto, saingy mbola manan-danja indrindra ao amin'ny fanangonana izy. Anisan'izany ny asa ataon'ny mpanakanto Orogoaiana, ny hosodokan'ireo tompon'andraikitry ankehitriny, sary sokitra sy sary sokitra noforonin'ireo tompon-tany eoropeanina. Eo akaikin'ny Mozean'ny Zavakanto Zavakanto dia zaridaina japoney iray, izay irery ihany ao amin'ny firenena iray manontolo.
Museum of Fine Arts. Ny mari-pamantarana malaza iray any Orogoay dia ny Museum of Fine Arts, any Montevideo. Ny andiany dia misy asa 6000 noforonin'ireo mpanakanto Orogoay sy vahiny. Eto ianao dia afaka mankafy ny asan'ny Pablo Picasso, ary koa ireo sarivongana misy ny zavakanto malaza sy maoderina. Ao amin'ny fananganana ny tranombakoka dia misy tranomboky iray, izay manangona boky 8000.
Palacio Salvo. Eo afovoan'i Montevideo no ilay palitao taloha Palacio Salvo, izay noheverina ho ilay trano avo indrindra any Amerika Atsimo hatramin'ny taona 1928. Ny haavony dia 105 m. Ny lapa dia karazana fampisehoana ny "Comedy Divine" an'i Dante. Noho izany, ireo fonosana telo ao Palacio Salvo dia maneho ny helo, ny efitrano 1-8 dia afofandiovana, ary ny tilikambo avo (15 m) dia ny lanitra. Tamin'ny voalohany, nalaina tamin'ny antsipirihany zavakanto maro izy, izay nolavina na nesorina.
Monument "Hand" any Punta del Este. Ity mari-pamantarana, sary sy famaritana izay azo jerena ao amin'ny tranokalantsika, dia efa tandindon'ny Orogoay. Izy io dia maneho ny tadin-doha amin'ny rantsan-tànana dimy ao anaty fasika. Amin'izany fomba izany, ny mpanoratra ny sary sokitra, Mario Iarrzarabal, dia nanandrana naneho ny fifandraisan'ny olombelona sy ny natiora. Ny tsangambato dia nandray anjara tamin'ny fampiratiana tanora mpanao sary sokitra tamin'ny 1982. Ny "tanana" dia mbola toerana tsara indrindra ho an'ny mpizaha tany.
Beach de los Positos. Ny tora-pasika sandoka, miorina 10 minitra miala an'i Montevideo, dia toerana mahafinaritra ho an'ireo tia ny fialantsasatra mangina sy mavitrika. Ny fepetra tsara indrindra ho an'ny mpizahatany amin'ny taona rehetra dia noforonina eto. Ny sasany amin'izy ireo dia mipetrapetraka eo amin'ny masoandro, ny hafa milalao baolina na volleyball, ny hafa kosa mankafy ny toerana misy azy avy amin'ny trano fisakafoanana eo akaiky. Noho ny fametrahana fotodrafitrasa sy toerana mahazatra, nanjary toerana mahafinaritra ho an'ny mponina sy ny mpitsidika avy any Brezila sy Arzantina ny moron-dranomasina.
Ankoatra ireo fanatanjahatena voalaza etsy ambony, ao Orogoay dia maro ireo zavatra hafa, izay tsy mahaliana sy manan-danja. Ny mpizahatany tsirairay izay manandrana fialantsasatra ara-tontolo iainana, mavitrika na ara-kolotsaina, dia hahita zavatra iray izay hampahatsiahy azy mandrakizay ity firenena ity.
Fialantsasatra any Arzantina
Fialan-tsasatra any Bolivia
Visa ho an'i Chili
Fialantsasatra any Bolivia
Valam-pirenena ao Paragoay
Aleo manasa rà amin'ny akanjo?
Kitapo modular ho an'ny lalantsara
Sakafo mamoa voa
Taratasy avy any ivelany avy amin'ny hazo oak
Hividy poti-mofo amin'ny rongony
Tsy mamaly ny anarany ny zaza
Inona no nofinofin'ny alika?
Skaly hoditra eo amin'ny loha
Cod ao amin'ny foibe ao anaty lafaoro
Ho vitanao hatory ve raha tsy afaka matory ianao?
Ahoana ny mahaliana ny ankizy mamaky teny?
Bedouin avy any Egipta - properties
Kitapo amin'ny tenanao
Fofona maimbo misy kifiry tsy misy atody
Kitapo misy trondro sy ovy
Haircuts - fahavaratra 2014
Wallpapers ao amin'ny aterineto
Famonoana volo momba ny hazavana - vokany